Khilaaf: Maamulka Paris Saint-Germain Iyo Xidhiidhka Kubbada Cagta Brazil Oo Si Wayn Iskugu Khilaafsan Qaabka Loola Tacaalayo Dhaawaca Neymar Jr. – GOOL24.NET
Khilaaf: Maamulka Paris Saint-Germain Iyo Xidhiidhka Kubbada Cagta Brazil Oo Si Wayn Iskugu Khilaafsan Qaabka Loola Tacaalayo Dhaawaca Neymar Jr.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa si wayn u soo ifbaxayay khilaafka u dhexeeya maamulka kooxda Paris Saint-Germain iyo xidhiidhka kubbada cagta Brazil ee qaaba loo xalinayo dhaawicii Neymar Jr ku soo gaadhay kulankii Marsielle, waxaana jira danno iska hor imanaya oo ay labada dhinac xalka u arkaan.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa ka cago jiidaysa in ay qaadato go’aanka uu xidhiidhka kubbada cagta Brazil doonayo oo ah in qaliin lagu sameeyo Neymar Jr si loo xaliyo dhibaatada jabniinka ah ee canqowga lugtiisa midig ka soo gaadhay, waxayna PSG wali rajo ka qabtaa in Neymar uu daawayn deg deg ah qaato isla markaana la eego haddii uu fursad u heli karo kulanka Real Madrid.
Dhinaca kale kooxda Paris Saint-Germain ayaa doonaysa in Neymar Jr uu qaato daawayn caadi ah oo aan qaliin ahayn si haddii ay kooxdoodu soo dhaafto Real Madrid uu Neymar jr qayb ka noqon karo wareega siddeed dhamaadka UEFA Champions League.
Haddaba war cusub oo laga helay Folha de Sao Paulo, sida ku cad heshiiska Neymar jr ee PSG waxaa qaabka loo xalinayo dhaawaca xidigan soo gaadha go’aanka kama danbaysta ah iska leh maamulka kooxda PSG, waxaana sidoo kale heshiiska Neymar lagu xusay in haddii uu ka dhego adaygo go’aanka maamulkiisa ee xaalada dhaawac in heshiiskiisa ay PSG si kali ah u kalsali karto oo uu bixin doono magdhawka heshiiska.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale taxadar ka muujinaysa in Neymar Jr uu qaliin maro taas oo keenaysa in muddo laba bilood ah uu garoomada ka maqnaan doono taas oo ah waxa ay xidhiidhka kubbada cagta Brazil doonayaan si uu koobka aduunka ugu soo aado waqti uu si buuxda xaaladiisa uu uga soo kabsaday.
Madaxa dhakhaatiirta xulka qaranka Brazil ee Rodrigo Lasmar ayaa u safray caasimada France ee Paris si uu kulan ula yeesho maamulka kooxda PSG iyo waliba dhakhaatiirta si ay u wada gaadhi karaan go’aan iyada oo la kaashanayo la taliyaasha Neymar Jr isla markaana xaalada loo dajin lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, aabaha dhalay Neymar jr ayaa sheegay in ayna doorasho kale haysan oo aan ka ahayn in wiilkiisu qaliin maro balse waxa uu qiray in go’aanka dhakhaatiirta PSG iyo Brazil uu noqon doono kan lagu gaadhi doono go’aanka kama danbaysta ah.